Ejypta: Mifarana Ny Fifidianana Ary Zavatra Hafa Indray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Janoary 2018 16:00 GMT
Famintinana sy ny vokatra
Tamin'ny taham-pandraisana anjara 26% sy tamin'ireo seza nifaninanana 444, nahazo ny seza maro an'isa (77%) tao amin'ny Parlemanta ny antokon'i Mubarak, Antoko Demokraty Nasionaly (NDP). Ny Mpirahalahy Miozolomana) nahazo seza mahatalanjona 20% ary resy be kosa ny mpanohitra laika sy ny tsy miankina satria ny ambin-tseza vitsivitsy no hany azon'izy ireo. Nanendry mpikambana 10 ny Filoha Mubarak, anisan'izany ireo vehivavy 5 sy Kristianina 5 satria miharihary fa zara raha manana solontena izy ireo. Mbola misy seza 12 hodinihana.
33% monja tamin'ireo kandidà NDP nifaninana no nandresy, ny sisa kosa mahaleo-tena izay nifaninana tamin'ireo kandidà NDP saingy nanatevin-daharana ny antoko NDP raha vantany vao nandresy.
Lafin-javatra hafa, olona 11 no maty, maherin'ny 600 no naratra ary manodidina ny 1300 amin'ny Ikhwan no voatazona..
Ny andro farany amin'ny fifidianana
Ny fifaninanana tamin'ny fihodinana fahatelo no tena mihoso-drà indrindra, 8 no maty ary 500 no naratra. Niseho tamin'ny fahitalavitra sy ny media hafa ny zava-nitranga tahaka ny Ady.
Hoy i Baheyya:
Araka ny natahoran'ny maro, nahitàna mpitandro ny filaminana manamafy ny fampiasan'izy ireo herisetra tamin'ny mpifidy mba hanakana izay fandresena fanampiny ho an'ny kandidà mpanohitra, indrindra ny Mpirahalahy Miozolomana ny andro farany tamin'ny fifidianana. Tsy nianona fotsiny tamin'ny sakan-dalana sy ny fanakatonana birao fandatsaham-bato ihany ireo mpitandro filaminana, fa nitifitra etona mandatsa-dranomaso sy bala fingotra tamin'ny vahoaka mpifidy.
Namoaka sary maromaro momba ny zava misy tahaka ny mahita Intifada ihany koa i Baheyya:
Sandmonkey koa namoaka sary marobe.
Nitatitra i Boody fa nanakana ny biraom-pifidianana tao an-tanànany tao Zagazig ny polisy vao maraimbe. Nahita jiolahimboto mifampitora-bato tamin'ireo mpikambana ao amin'ny Mpirahalahy Miozolomana izy. Raha nampiasa baomba mandatsa-dranomaso kosa ireo mpitandro ny filaminana misahana ny rotaka.
Fitantarana Teo Aloha Nataon'ny Global Voices Momba Ny Fifidianana:
Dingana voalohany tamin'ny fifidianana
Fifaninanana voalohany tamin'ny fihodinana faharoa
Fifaninana tamin'ny fihodinana faharoa sy fifaninanana voalohany tamin'ny fihodidnana fahatelo
Manohitra ny fandrobàna sy ny hosoka i Kefaya
Nilaza momba ireo hetsi-panoherana izay nahitana olona 1000 ka hatramin'ny 2000 mandeha ao afovoan-tanànan'i Kairo ny Freedom for Egyptians.
Manontany kosa i Sandmonkey raha, tsy manan-kery intsony ny hetsika taorian'ny faharesen'ny mpanohitra laika tamin'ny fifidianana.
Sary maromaro momba ny fihetsiketsehana
Telecom Ejipta IPO
Niteraka resabe tao Ejypta ny fidiran'ny Telecom Egypt tamin'ny tsenam-bola. Nilaza i Ikhnaton2 fa tsy mahafantatra firy momba ny fitantanam-bola izy saingy nandre fa misy ny olona izay tsy mbola nifampiraharaha tamin'ny fanakalozam-bola alohan'ny hivarotana ny zavatra lafo vidin'izy ireo sy mividy betsaka araka izay azony natao tamin'ity IPO ity. Nilaza izy fa mahita izany ho tahiry tena sarobidy hananana miaraka amin'ny fahafahana goavana ny olona. Nilaza izy fa mety hanohintohina ireo mpampiasa vola madinika ity IPO ity, na dia izany aza. (Arabo)
Naka sary sasantsasany tamin'ny findainy i Zein, izay ahitana olona miezaka miditra ao amin'ny biraon'ny mpanelanelana momba ny fivarotam-pananana (fanaka).
Notantarainay tetsy aloha ny fisamborana an'ilay mpanao gazety Abo Islam. Azonao arahana ny zavatra nosoratan'ny tontolon'ny bilaogy Ejypsiana momba an'i Abo Islam.
Mamakafaka amin'ny antsipiriany momba ny faharesen'ny Ahly (misolo-tena an'i Afrika) manoloana ny Saodiana Ittihad tamin'ny lalaon'izy ireo voalohany tamin'ny Fiadiana ny ho tompondaka manerantanin'ny klioba i Mo Nassar.
Farany, zavatra tsara
Lady Ostrich (El Set Na'ama) manoratra amin'ny teny Arabo miaraka amin'ny sary momba ny tetikasa iray izay nanatsara ny ampahan'ny fepetra ao amin'ny faritry ny mahantra ao Kairo.